Mastiff: Ogow astaamaha iyo daryeelka noocyadan | Eeyaha Dunida
Noocani waxaa loo arkaa mid u gaar ah geesinimada iyo kalgacalka kalgacalka leh ee milkiilayaasheeda, iyadoo aad ugufiican sida eey waardiye ah, sidaas darteed waa lagu keydin jiray guryaha waaweyn. Faa'iidadeeda waxay ka timid xaqiiqda ah in si weyn loogu taliyay sida eey u ilaaliyo shirkada sababaheeda awgeed.
Intii lagu jiray qarniyo, xijaabku wuxuu raacay adhiga difaaca lo'da weerarka eyda. Miyaad xiisaynaysaa noocaan? Kadib sii wad aqrinta maqaalkan si aad uga ogaato dhinacyada ugu muhiimsan ee la xiriira arintan.
Sidii aan horayba u soo xusnay, shaqadeedu waa iska difaac. Waxaa sidoo kale loo yaqaan magacyo kale iyadoo kuxiran gobolka juquraafi ahaan halka ay ku taallo, midkoodna waa eey lo 'ah.
Waa wax xiiso leh inaad wax ka ogaato taariikhda tartankan sharafta leh waana taasi 1981 Ururka Isbaanishka ee Isbaanish Mastiff Ey.
Ururkani wuxuu lahaa fikradda abaabulka a barnaamijka si loo ururiyo macluumaadka ku saabsan noocyadan waagii hore. Taasi waa sababta uu u soo saaray qaab cusub oo ujeedkiisu yahay inuu ka soo kabto dhammaan macluumaadka tixraacaya oo ku habboon eeyaha hore ee lo'da.
Waxay leeyihiin astaamo qeexa iyaga oo siiya aqoonsi, taasi waa, taas Waa noocyo loo adeegsan karo xayawaanka iyo eyda ilaalada ah labadaba. A.
Waxaan hoos ku soo koobaynaa qaar ka mid ah sifooyinka iyo astaamaha ka dhigaya mid runtii soo jiidasho leh:
Waxaa lagu gartaa inuu yahay eey weyn, runtii xoog badan, aad u awood badan oo muruqyo badan leh. Tan ayaa lagu yidhi taas Waa noocii ugu weynaa ee lagu arko Spain.
Waa tartan aad loo aaminin yahay, oo ku adag adkaynta shisheeyaha hortooda iyo aad isugu hubo naftiisa. Dhogortiisa ayaa cufan waxayna leedahay nooc ka mid ah timaha dhogorta leh oo bixiya muuqaalka jaakad hoosta ka hoosaysa, taas oo luma xagaaga.
Midabkooda, kuwa cad, madow iyo kuwa biriijka ayaa aad ugu badan. Dhererkoodu waa 60 iyo 80 cm iyadoo kuxiran hadday lab yihiin iyo inay dhadig yihiin. Miisaanka wuxuu u dhexeeyaa 40 ilaa 70 kiilo inkasta oo ay suurto gal tahay inay gaadhaan 90 kg.
Badanaa waxaa loo isticmaalaa in lagu daryeelo xoolaha iyo sidoo kale beeraha iyo guryaha. Sida caadiga, way isku dheelitiran yihiin, taas oo ku sifeysa inay yihiin eeyo wehel wanaagsan. Celceliska cimiladu waa inta udhaxeysa sideed ilaa toban sano marka laga hadlayo deegaanka waxaa la dhihi karaa wuxuu sifiican ugu habboon yahay qoysaska, deegaanka miyiga, daaqa iyo / ama ilaalinta.
Isaga waa la dhihi karaa wuxuu ka mid yahay kuwa ugu waaweyn ee Isbaanishku leeyahay. Waxaa jira shaki ku saabsan asalkiisa iyo xaqiijintiisa, laakiin waxaa jira xog taariikhi ah oo runta ugu dhow; ayaa waddanka ku yimid iyada oo loo marayo Faaniyaaniyiintii iyo Celtiisyadii waxayna u isticmaali jireen Roomaanku sidii eyda dagaalka.
Waxa aan shaki ku jirin ayaa ah in qarniyadii dhexe ay waxtarkoodu udub dhexaad u ahaa ilaaliyayaasha xoolaha. Guud ahaan, astaamaheeda waa kuwa a taran xoog leh, xoog leh, awoodna u leh in ay difaacdo lo'da xayawaanka kale hadaad dareento cabsi.
Eyga Isbaanishka Mastiff waa xoog badan yahay, weyna yahay oo carrab la 'yahay. Lugaha waa dhaqdhaqaaq, culus yihiin oo xoog badan yihiin. Waxay leedahay madax aad u weyn, dhago jilicsan oo maqaarka wejigiisu ka soo laalaado indhaha iyo dhabannada.
Jirka oo dhan waxaa ku daboolan timo aad u qaro weyn. Sida midabka, kuwa ugu caansan waa midabada adag iyo gogosha.
Dayactirkeedu waa mid fudud oo u baahan jimicsi badan, sidaa darteed waxaa lagugula talinayaa inaad ku noolaato guri weyn. Ha dayacin welwelkiisa jimicsi la’aan darteed.
Cadayashada waxaa lagugula talinayaa inaad ka saarto dhamaan raadadka wasakhda iyo timaha dhintay. Hubi markasta oo aad banaanka u baxdo boodada iyo shilinta oo markaad maydho u daryeel dhegihiisa.
Ahaanshaha nooc xajmi adag leh, wuxuu iska ilaaliyaa cudurada sida hip dysplasia. Waa inaad cuntaa cunto dheellitiran, oo leh nafaqooyin muhiim u ah dheef-shiidka wanaagsan; ka taxaddar tallaalkiisa iyo inuu si joogto ah u xaadiro dhakhtarka xoolaha.
Waa inaad sidoo kale deworm ka dhigtaa illaa inta uu takhasusku kugula talinayo. Ku dul-nooleyaashu waxay quudiyaan qayb ka mid ah jirkaaga, iyagoo sababa dhaawacyo toos ah oo u horseedi kara shuban, miisaan lumis, matag iyo xitaa tuubada xiidmaha waa la joojin karaa.
Kaliya waa inaad xisaabta ku dartaa sax iyo Gooryaamo ku filan leh dawooyin si gaar ah loogu talagalay xayawaanka.
Noocani wuxuu u baahan yahay xoogaa kalooriyaal ah oo aad u sarreeya sababtoo ah cabirkiisa weyn, iyo sidoo kale jimicsi ku xiran qaabkiisa adag, dayactirkeedu waa mudnaanta waana in la raacaa dhamaan talooyinka saxda ah.
Waxay kuxirantahay haday wali tahay eey, waxaa lagugula talinayaa in cunnadeeda la qaato qaybo yar iyo waqtiyo kala duwan ugu yaraan saddex jeer maalintii, oo aan ahayn markii xayawaanku doonayo, waa inuu la qabsado edbinta ku saabsan caadooyinka cunnadiisa.
Sidoo kale iyo talooyinka way fiicantahay inaad cuntid antioxidantsmaadaama ay lagama maarmaan tahay in jaakadu xaalad wanaagsan ku jirto. Si la mid ah, u sii dhammaan borotiinnadaas iyo cuntooyinka ka ilaaliya laabatooyinkiisa.
Maaddaama ay dhibaato ku qabaan buurnida, waa inaad daawataa miisaankooda iyo dheelitirnaan la'aanta kale ee cuntada. Sidoo kale kormeer wadatashiyada aad la leedahay takhasusaha, wuxuu ku siin doonaa jahayn fiican sida Mastiffku u kobcayo.
Ha ka fikirin inaad jimicsi sameysid ama aad u lugeeysid socodka kadib cuntada, waxaa lagugula talinayaa inaad sugto saacadaha saxda ah si ay si wanaagsan ugu sameyso dheef-shiidka, haddii kale dhibaato ayey sababi kartaa.
Waa inaad u soo bixisid socod ugu yaraan dhowr jeer maalintii, waxaa loogu talagalay caafimaadkaaga iyo caafimaadkaaga jirka. Waxaan kuu xaqiijin karaa inaad tan ku xakameyn doontid culeyska iyo dheefshiidka wanaagsan eeygaaga.
Ka ilaali isaga dulinka, la samee jadwalka tallaalka dhakhtarkaaga xoolaha. Noocani wuxuu u baahan yahay feejignaan badan, dareemidda kali ahaanta ama aan la siinin kalgacal waxay sababi kartaa inay si xun u falceliso oo xitaa u horseedo dhibaatooyin nafsi ah
Mid ka mid ah dhibaatooyinka caafimaad ee lagu soo bandhigay qodobkan ayaa ah hip dishibiliinka, taas oo kuu sababi karta xoogaa xanuun oo aad xitaa dhuuxdo. Waxaad horeyba u ogayd inaad ku yareyn karto jimicsi, isboorti, cunto iyo socod.
Ka taxaddar dhibaatooyinka qallooca caloosha. Haddii aad daryeesho in qaadashada cuntada ay ku jirto qaybo yaryar dhowr jeer maalintii, waxaad ilaalin doontaa caafimaadkooda iyo fayoobaantooda.
Mastiff Isbaanishka sidaas darteed Waa eey weyn oo xoog leh, aadna ugu kalsoon sayidkiisa aadna u jecel carruurta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dunida eyga » Eeyaha Guud » Eyda ayaa dhasha » Mastiff